”Waxaan rabaa inaan joogo AC Milan” – Manuel Locatelli – Gool FM
”Waxaan rabaa inaan joogo AC Milan” – Manuel Locatelli
(Milano) 26 Abriil 2017 – Manuel Locatelli ayaa sheegay “inuu aad ugu faraxsan yahay fasal-ciyaareedkan,” isagoo sheegay inuu sii joogayo AC Milan oo uu doonayo inuu booskiisa u dagaallamo.
Muluqan 19-jirka ah ee khadka dhexe ayaa fasalkan saftay 26 kulan oo rasmi ah, isagoo dhaliyay 2 gool oo uu ka mid yahay mid cajiib ahaa oo uu ka dhaliyay Juventus.
“Waan ku faraxsanahay fasal-ciyaareedkan, balse ma dhamaanin oo waxaan rajaynayaa inaan ku dhamaysanno si kasii wanaagsan,” ayuu u sheegay hilinnada warar ee Mediaset Premium, Sky Sport Italia iyo MilanNews.
“Hal mar baan qarxey si aysan weliba cidina filaynin, hadda oo aanan wax badan ciyaaraynin xitaa waan faraxsanahay, waxaana rajaynayaa in waloow Axaddii nalaka badiyay aan kulanka soo socda boorka iska jafno,” ayuu raaciyay Loca.
GOOGOOSKA: Barcelona vs Osasuna 7-1 (Barca oo Osasuna saxariirisay)